Sombiny - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
MATOKY TENA > Nohamafisin’ny pasi-tera Mailhol, filohan’ny fiangonana Apokalipsy indray omaly fa amin’ity taona ity no fotoana hametrahana azy eo amin’ny fitondrana. Nataon’ity farany ohatra tamin’izany ny fomba nametrahana ny Filoha teo aloha, Marc Rava-lomanana sy ny Filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina teo amin’izay toerana izay.
TSY AN-KIATO > Hanohy fivoriana tsy an-kiato hatramin’ity faran’ny herinandro ity ireo mpikambana eo anivon’ny birao foiben’ ny Ffkm. Hanjohy azy ireo amin’izany ireo Filoham-piangonana efatra mirahalahy izay handinika ny fomba hoentina miroso amin’ ny fanelanelanana ho fandaminana ny toe-draharaha politika eto Madagasikara.
Miandry baolina mitontona(0)
Ny hitsikitsika tsy mandihindihy foana fa ao raha. Misy dikany lehibe eo amin’ny sehatra politika, indrindra manoloana ny savorovoro momba ny raharaham-pifidianana, ny fandra-isana andraikitra ataon’ny Foloalindahy. Tsy maninona aleo tonga dia hotsorina hoe Foloalindahy satria toy ny haingom-bato tsy azo ariana na koa mpitsara an-jorony miara-mitantana ny lalao eny ambony kianja ny Ffm, izay manam-boninahitra ihany koa no mitantana azy sy ny Komity mpanara-maso ny fampiharana ny tondrozotra. Fanampin’izay, naneho hevitra hentitra ny amin’ny tokony tsy handraisan’ny iraisam-pirenena fanapahan-kevitra mety hanohintohina ny filaminana, mialoha sy mandritra ary aorian’ ny fifidianana, ihany koa ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Tafika sy ny Polisim-pirenena raha ny fanambaràna nataony omaly. Midika izany fa mety hisy fanapahan-kevitra lehibe horaisin’izy ireo, izay tsy mbola fantatra tsara hoe ahoana no ho fandehany, raha toa ka tsy mety hampitovy tandin-dokanga ireo kandidà telo mianadahy mianaka: Ravaloma-nana Lalao, Ratsiraka Didier ary Rajoelina Andry, izay tsy ankasitrahan’ny vahiny mpanaraka ny raharaha amin’ny fahitalavitra fotsiny, ny firotsahan’izy ireo eo ambony kianja. Arakaraka izay zavatra hitranga rahampitso, aorian’ny fampihaonana ireo kandidà telo ireto, izany no mety ho fiovan’ ny toe-draharaha eto Madagasikara. Izay iray alehany, na hitohy ny tetezamita, amin’ny alalan’ny fanemorana ny fifidianana, raha toa ka mihizingizina tsy mety miala eny ambony kianja izy telo mianadahy mianaka. Na ihany koa mety hanery azy ireo hiala ankitsirano ny Foloalindahy, ka tsy hanova ny datim-pifi-dianana saingy amin’izay dia tsy maintsy hiala avokoa ireo kandidà tafiditra ao anatin’ny lisitr’ireo mpanao politika 109 nosazian’ny vondrondra iraisam-pirenena. Io dia mety hitarika amin’ny mety ho fahavitsian’ireo mpilatsaka hofidiana satria maromaro ihany ireo kandidà voakasik’io fepetra io. Miankina amin’izay mety ho fahendren’izy telo miana-dahy mianaka izany ny fizotran’ny raharaham-pirenena. Izany hoe miandry baolina mitontona fotsiny sisa ny Foloalindahy sy ny Ffm ary ny Csc, dia hitsoka kiririoka handravàna tanteraka na hanohizana ny lalao! Tojo Rakotomalala Malaza ratsy(0)
Anosikely – Mety hihemotra indray ny fifidianana Filohan’ny Cst vaovao(0)
Mbola ho adihevitra be indray ny famerana ny daty hanatanterahana ny fifidianana izay ho solon’ ny jeneraly Dolin Rasolo-soa, eo amin’ny toeran’ny filohan’ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita. Omaly dia nilaza fa mbola nangataka ny hamerenana ny fandinihana fanindroany ny fanapahan-kevitra noraisina, ny zoma lasa teo, izay efa nankatoavana ny fotoana hirosoana amin’io fifidianana io indray ny ankamaroan’ireo mpikambana eo anivon’ny Cst, indrindra fa ireo akaiky ny Filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina. «Marina fa efa nolaniana fa tokony ho raham-pitso (ndlr: anio) no hiro-soana amin’izay fifidianana izay. Mbola azo atao tsara anefa ny mifampidinika momba iny fanapahan-kevitra iny indray. Mbola tsy niala teo amin’ ny toerany rahateo hatreto ny filohan’ny Cst, ka mba ho fanajana azy dia tokony ho aorian’ny fametraham-pialany vao hirosoana ny fifidianana izay hisolo azy», hoy ny fanazavan’ ny Sekretera nasionalin’ ny antoko Tgv, Lanto Rakotomavo, omaly. Ny filoha lefitry ny Cst avy amin’ny ankolafy Ravalomanana, ny Me Hanitra Razafimanantsoa koa omaly dia nanipika fa «manan-jo ny hangataka izany ny rehetra ka ho hita eo izany izay ho fizotry ny raharaha». Tsilian-tsofina aloha no nahenoana fa nisy ny taratasy nataon’ny Filohan’ ny Cst, milaza ny mbola maha mpitarika azy ara-dalàna io Andrimpan-jakana io. Tamin’ny zoma rahateo dia ny antsasa-manilan’ireo mpikambana Cst ihany no nanao ny tsangan-tanana nankatoavana ilay fe-potoana tokony hanaovana ny fifidianana filoha vaovao hitantana ny Cst. JR
Fanelanelanana – Ho avy indray i Chissano sy Simao (0)
Raha omaly no tokony nigadona teto Madagasi-kara i Joaquim Chissano, lehiben’ny fanelanelanana iraisam-pirenena amin’ny krizy eto Madagasikara, dia tsy tonga indray izy tamin’ny ora farany. Na izany aza dia fantatra fa andrasana amin’ity herinandro ity ny fahatongavany. Toy izay ihany koa ny mpitariky ny fanelanelanan’ny Sadc, Leonardo Simao. Ny 5 mey teo no nandalo farany teto Madagasikara i Joaquim Chissano. Nilaza ary nanizingizina izy tamin’ izay fa «ny sori-dalana ihany no vahaolana hivoahana amin’ny krizy». «Mirona mankany amin’izay, hoy izy, ny dinika ataon’ny Fiombonan’ny fiangonana kristianina eto Madagasikara (Ffkm)». Tsipaka am-bavafo anefa no valin’izay avy amin’ny Ffkm satria nitaky ny hanaovana tetezamita vaovao ivelan’ny tondrozotra mihitsy ireo mpizaika tamin’ilay fihaonana nokarakarain’izy ireo teny Ivato, ny 5 mey io ihany. Manoloana ny zava-misy amin’izao fotoana izao dia mihazakazaka ireo avy amin’ny mpanelanelana hankaty Madagasikara. Tsilian-tsofina no nahalalana fa mety hiala amin’ny tondrozotra ny fanapahan-kevitry ny Foloalindahy, ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy ary ny Komity manara-maso ny fampiharanana ny tondrozotra aorian’ny fihaonan’izy ireo amin’ireo kandidà telo miteraka olana ankehitriny anio hariva eny amin’ny Carlton Anosy. Ranaivoson Faniry Hanery ireo kandidà telo hifanaraka ny Foloalindahy, ny Ffm ary ny Csc (0)
Nanapa-kevitra ny hamory ny Filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Ravalomanana anio hariva amin’ny telo ora, etsy amin’ny Hotel Carlton, Anosy, ny Foloalindahy sy ilay Komity mpanara-maso ny fampiharana ny sori-dalana (Csc) ary ireo mpikambana eo anivon’ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (Ffm). «Ny hitadiavana mari- maritra iraisana» eo amin’ ireo kandidà telo mano-loana ilay fitakiana ny fisintonana ny firotsahan-kofidian’izy ireo amin’ny fifidianana no nambaran’ny Foloalin-dahy sy ny Csc ary ny Ffm fa tanjona amin’ity fihaonana ity. Isan’ireo voaasa hiatrika izany ireo tompon’andraikitra mahefa eo anivon’ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana ao anatin’ny tetezamita (Cenit).
Tapatapany, Mpanoratra Rijakely, 12.01.2013, 09:46	FIARAHAMONINA